High Jewellery: Van Cleef & Arpels သည်၎င်း၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသသည်
သြဂုတ်လ 8, 2017
Van Cleef & Arpels သည်မြင့်မားသောရတနာများစုဆောင်းမှုအသစ်၏အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်လာသည့်အဖိုးတန်သောနှင့်ကိုယ်ပိုင်တီထွင်သူများနှင့်အတူလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါလျှို့ဝှက်.
ထက်ပိုပြီး တစ်ရာထူးခြားတဲ့ဖန်တီးမှု, လျှို့ဝှက်ချက်၏အဓိကအကြောင်းအရာကိုအနက်ဖွင့်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်မြတ်နိုးနှင့်ဖန်တီးမှုနှင့်အံ့သြစရာနည်းလမ်းတွေအတွက်ပြန်ဆို။
လျှို့ဝှက်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ labyrinthine လမ်းကြောင်းများ၊ ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ငြင်းဆန်မှုများနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲအပြောင်းအလဲများသည်ကဗျာဆရာများနှင့်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ၏ကျော်ကြားသောကိုးကားချက်များနှင့်အတူတူဖြစ်သည်ပလေတို၊ အော်စကာဝိုင်းလ်နှင့်ဘာလ်ဇတ်တို့ကဲ့သို့သော Fleur Bleue ဖြစ်သည် လက်စွပ်အော်စကာဝိုင်းလ် (Gold Oscar Wilde) ၏ကိုးကားချက်ကိုဖော်ပြရန်အပေါ်ဖက်အလှည့်သည်။ “ une vie sans amour est comme un jardin sans soleil” (ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိသောဘ ၀ သည်နေမရှိသောဥယျာဉ်တစ်ခုနှင့်တူသည်) ။
Van Cleef & Arpels - Le Secret မြင့်လက်ဝတ်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။
Fleur Bleue Ring ကို - ဖွင့်လှစ်
ရွှေဖြူ၊ စိန်များ၊ မြများ၊ ပါရာဘာကဲ့သို့သော Tourmalines များ၊ ၅.၁၃ ကာရက်ရှိကူရှီးဖိုက်နီလာ။
ဒါမှမဟုတ်ထဲမှာလိုပဲ Métamorphose du Cygne ဘရောင်း, Alexandre Pouchkine မှုတ်သွင်းဇာတ်လမ်းတစ်မင်းသမီးလေးတစ် ဦး swan သို့လှည့်ခံရအတူဘဝကိုမှကြွလာတော်မူသော။
Van Cleef & Arpels - Le Secret မြင့်လက်ဝတ်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။ La Métamorphose du Cygne Brooch ။ ရွှေဝါရောင်၊ ရွှေဖြူ၊ ရောင်စုံနီလာနီလာ၊ spessartite garnet များ၊ အနက်ရောင် spinels များ၊
အပိုင်းအစ၏နောက်ကျောကိုလှည့်သောအခါအသွင်ပြောင်းလဲခြင်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်သည်။ မိန်းမငယ်၏ကိုယ်ထည်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ နှစ်ခု tableaux မှော်အားဖြင့်သကဲ့သို့, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အောင်မြင်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာသည်ပါ ၀ င်မှုအားကြာရှည်စေသည် - အပြာရင့်မှအနီရောင်အထိ - နီရဲသောအရောင်များမှနီလာနီလာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် - နှင်းဆီပန်းစိန်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောfemတ္ဆွဲအား၏လှပမှု၊ ပွဲလမ်းသဘင်
ထဲမှာ အဆိုပါလျှို့ဝှက် မြင့်မားသောရတနာစုဆောင်းမှု၊ လည်ဆွဲများသည်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအပိုင်းများဖြစ်သည် - ပြောင်းလဲနိုင်သောရတနာများကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်သည်။
အဆိုပါ Pegasus ဆှဲကွိုး သီရိလင်္ကာမှ ၄၅.၁၀ ကာရက်ရှိနီလာနီလာတစ်မျိုးလုံးကိုဗဟိုပြုသည်။
Van Cleef & Arpels - le Secret High Jewellery Collection ။
ရွှေဖြူ၊ စိန်၊ မြ၊ နီလာ၊
၄၅.၁၀ ကာရက် (သီရိလင်္ကာ) ၏မြ - ဖြတ်ထားသောနီလာ။
ယင်း၏အလယ်ဗဟိုတွင်လည်ဆွဲသည်နေရာတစ်ခုကိုဂုဏ်ယူစေသည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ၄၅.၁၀ ကာရက်ရှိနီလာရက်ရက်ရောရော Pierre ၏ de Caractère™ ၎င်းသတ္တုတွင်းဟောင်းများ၏အရည်အသွေးနှင့်၎င်း၏ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၏အရည်အသွေးနှင့်ပြင်းထန်သော“ တော်ဝင်အပြာ” ကိုမြတ်နိုးသည်။
ကျောက်တုံးများကိုရွေးချယ်ခြင်းမှသည် situ ရှိစိန်များ၏လက်မှုပညာအထိ၊ ဖယောင်းပုံစံ Pegasus မှလည်ဆွဲ၏ရောနှောထားသောလိုင်းများအထိဤဖန်တီးမှုသည် High Jewellery ၏ virtuoso savoir-faire ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ အားဖြင့်ပြည့်စုံတစ် ဦး က feat Mains d'Or Place Vendômeရှိ Van Cleef & Arpels ၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်နာရီပေါင်း ၂၂၀၀ ကျော်ပါဝင်သည်။
နောက်ထပ်အံ့မခန်းလည်ဆွဲဖြစ်ပါတယ် Oiseau sur la Branche ရှည်လည်ဆွဲ.
Oiseau sur la Branche Long Necklace - ဝတ်ဆင်ထားသောမြင်ကွင်း
Oiseau sur la Branche ရှည်လည်ဆွဲ
ရွှေဖြူ၊ အဝါရောင်ရွှေ၊ မြ၊ ပတ္တမြား၊ အပြာနှင့်ပန်းရောင်နီလာ၊ \_ t
အဖြူရောင်ယဉ်ကျေးသောပုလဲများ၊ စုစုပေါင်း ၅၆၇.၁၄ ကာရက်အတွက်ပတ္တမြား ၂၄၀ သည်မြန်မာ။
Hans Christian Andersen ၏ The Nightingale ဇာတ်လမ်းဖြင့်မှုတ်သွင်းခြင်း ပြောင်းလဲရှည်လျားလည်ဆွဲ (သို့မဟုတ် sautoir) အနုပညာဗဟိုရတနာ motif တွင်ဝှက်ထားသော၎င်း၏စိတ်နှလုံးမှာအသိုက်ငှက်ကိုပါရှိသည်။
Oiseau sur la Branche Long Necklace - ပွင့်လင်း
Van Cleef & Arpels - Le Secret မြင့်လက်ဝတ်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။ Oiseau sur la Branche Long Necklace - ဗားရှင်းအတို
အမျိုးမျိုးသောဖွဲ့စည်းပုံများသည်အာရှကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအရောင်များနှင့် motif များကိုလွတ်လပ်စွာပြန်လည်အပ်နှံပေးသည်။ ရှဟံ၊ ယဉ်ကျေးသောပုလဲနှင့်မြများအသင်းကဗမာပတ္တမြား၏အနီရောင်ကြွယ်ဝမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ရိုးရာဘွဲ့ရကြိုးဖြင့်ချည်ထားသောနည်းစနစ်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာများနှင့်အရောင်အသွေးအားဖြင့် ၅၆၇.၁၄ ကာရက်ရှိသည်။
ဘယ်အချိန်မှာအဲဒါကိုမှကြွလာ အမြင့်ရတနာနာရီစုဆောင်းခြင်း၏မောင်းနှင်မှုအကြောင်းစဉ်းစားခြင်း၊ လျှို့ဝှက်နာရီတစ်လုံးမဖြစ်နိုင်ပါ Papillon လျှို့ဝှက်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့.
၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်များကစပြီး Maison အတွက်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သောလိပ်ပြာများ - ဝှက်ကစားပွဲတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။ ၎င်း၏အတောင်ပံအောက်၌သူတို့အနက်မှတစ်ခုသည်လက်ချောင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်နိုင်သောပုလဲတိုင်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ အချိန်ကာလကိုလျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်တူသည်၊ မြများ၊ အနက်ရောင် spinels များနှင့်စိန်များဖြင့်ဖတ်ရသည်။
Van Cleef & Arpels - Le Secret မြင့်လက်ဝတ်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။ Papillon Secret Watch ရွှေဖြူ၊ စိန်များ၊ မြများ၊ အနက်ရောင်လှည့်ဖျားများ၊ ရှဟံကျောက်၊ အဖြူရောင်ပုလဲအဖြူ၊
အလယ်ဗဟိုမှာမျက်စိကိုဆွဲထားတယ် ၁၄.၅၇ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောထိပ်တန်းကိုလံဘီယာမြ။ ၎င်း၏ရှေးဟောင်းပစ္စည်းသည်ကြည့်ရှုသူအားကျောက်တုံး၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ ၀ င်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ လိပ်ပြာတောင်ပံများပဲ့တင်ထပ်နေသောသင်္ကေတတစ်ခုတွင်အနက်ရောင်နှင့်အနက်ရောင်နှင့်အနက်ရောင်အစိမ်းရောင်တို့၏အရောင်များကိုဖြတ်တောက်ထားသည့်စိန်များဖြင့်ပေါင်းစပ်။ ဘဝ၏လှပမှုအားလုံးကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်သည်။
အနည်းဆုံးတော့နောက်ဆုံးမဟုတ်ပါ လက်ကောက်ကအားလုံးအကြောင်းပါ Coeurs Enlacésလက်ကောက် - သုံးကြိမ်မြောက်လက်ရာ။
ပန်းရောင်ရွှေ၊ စိန်များ၊ ပန်းရောင်နှင့်အဝါရောင်နီလာများ၊
ပတ္တမြား, spessartite granets,3ကူဖြတ် - ဖြတ်ပန်းရောင် spinels
31.17 ကာရက်၏စုစုပေါင်းသည်။ ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ကလစ်များ။
မြင့်မားစွာပြောင်းလဲနိုင်သောဤဖန်တီးမှုသည် ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်ကြွယ်ဝမှုကိုပေးထားသည်။ ၎င်းသည်ဖြုတ်တပ်နိုင်သောကလစ်နှစ်လုံးနှင့်နှလုံးသားအကျယ်တဝင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အဆုံးမဲ့ထုံးကိုသရုပ်ဖော်ထားသည့် Shrivatsa သင်္ကေတဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသောဤအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသောလိုင်းများသည်မမြင်ရသောမျက်လုံးများထက်မျှဝေထားသောလျှို့ဝှက်မေတ္တာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Van Cleef & Arpels - Le Secret မြင့်လက်ဝတ်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။ Coeurs Enlacésလက်ကောက်။ ၃၁.၁၇ ကာရက်ရှိရွှေပန်းရောင်၊ စိန်များ၊ ပန်းရောင်နှင့်အဝါရောင်နီလာ၊ ပတ္တမြား၊ spessartite သဘာ ၀၊ ၃ kuushion ဖြတ်ပန်းရောင်လည်ဆွဲများ။ ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ကလစ်များ။
Van Cleef & Arpels - Le Secret မြင့်လက်ဝတ်ရတနာစုဆောင်းခြင်း။ Coeurs Enlacésလက်ကောက်။ ရွှေပန်းရောင်၊ စိန်များ၊ ပန်းရောင်နှင့်အဝါရောင်နီလာများ၊ ပတ္တမြား၊ spessartite သဘာ ၀ များ၊ စုစုပေါင်း ၃၁.၁၇ ကာရက်ရှိရွှေရောင်ပန်းပွင့်၊ ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ကလစ်များ။ အလုပ်အသေးစိတ်ကိုဖွင့်ပါ
အပိုင်းအစ၏စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်သည်၎င်း၏ပန်းနုရောင်မှအဖြူရောင်အထိသိမ်မွေ့သောအသံနိမ့်အဆင့်ကိုအလေးပေးဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးကလစ်တွင်စိန်၊ အဝါရောင်နှင့်ပန်းရောင်နီလာ၊ ပတ္တမြားနှင့် spessartite garnets များသည်စုစုပေါင်း ၃၁.၁၇ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောဂရုတစိုက်လိုက်ဖက်သည့်ပန်းရောင်လှည့်ဖျားသုံးခုတွင်ရွှင်လန်းသောစက်ဝိုင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
စိတ်နေစိတ်ထားနှင့်ကိုက်ညီရန်ဤမီးတောက်အားအဆင်တန်ဆာသည်စိန်ပွင့်များစွာကိုအလင်းတန်းများဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အလင်း၏ဆက်စပ်မှုများကြောင့်တောက်ပသောရောင်ရမ်းခြင်းအတွက်လမ်းခင်းပေးနိုင်သည်။ ကလစ်များနှင့်လက်ကောက်နှစ်ခုလုံးတွင်နောက်ခံကိုကြည့်သည်။ နောက်ခံ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု၊ ပွင့်လင်းမှုနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်လျှို့ဝှက်ချက်၏ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအသားအရေကိုဆန့်ကျင်။ ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အမြင့်ရတနာစုဆောင်းမှု အဆိုပါလျှို့ဝှက် အမြင်အာရုံနှင့်ကဗျာဆန်ဆန်အကြံပြုချက်များကိုကျောက်မျက်ရတနာများဖော်ပြသောဘာသာစကားဖြစ်သော Van Cleef & Arpels ၏သက်တမ်းကြာမြင့်စွာလက်မှတ်ထိုးထားသည်။
အနီရောင်ပတ္တမြားများမှသည်နီဗာနီနီများ၏နူးညံ့သည့်တန်ချိန်အထိအရာအားလုံးသည်တီထွင်ကြံဆမှုဖြင့်ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ဗန်ကလိဖ်၏လက်မှုလက်ရာလက်ရာကြောင့်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင်သုံးစွဲသောအချိန်ကိုမေ့သွားစေသည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ထုတ်ဖော်ပြသထားသည့်စင်ကြယ်လှသည့်အလှအပ၊
အဆိုပါလျှို့ဝှက် Van Cleef & Arpels မှရေးဆွဲထားသောအရောင်းအ ၀ ယ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲနိုင်သောရတနာများနှင့်အတူနတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်အားပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီးမြင့်မားသောရတနာ၏ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုအသစ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ CC
Tags:မြင့်မားသောရတနာ • ဗန် Cleef & arpels
မှတ်ချက်0ခုအမြင့်ရတနာ: Van Cleef & Arpels သည်၎င်း၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်"